XKMG oo qoraal u dirtay Baarlamaanka
Ra'iisal Wasaare Farmaajo
Ra'iisal wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khamiistii qoraal u diray guddoomiyaha baarlamanka.
Golaha xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan ay uga wadahadleen qoraal uu ra’iisal wasaare Maxamed Cabdulaahi Farmaajo maalintii khamiita ahayd u diray baarlamaanka kaasoo ku saabsanaa marxaladda kala guurka.
Nuqul ka mid ah qoraalkaasi oo ay VOA-du heshay wuxuu sheegayaa in ra’iisal wasaare Farmaajo uu qoraalkiisa ku hagaajiyay guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, uuna ku codsaday in fadhi deg deg ah ay yeeshaan guddi wasiiro ah oo uu isagu horkacayo iyo guddoonka iyo guddiyada baarlamaanka, si looga wadatashado marxaladda kala guurka, ayna aragti mideysan ka yeeshaan.
Qoraalka waxaa ku cad in ra’iisal wasaare Farmaajo uu codsaday in kulankaasi uu dhaco sabtida maanta ah. Hase yeeshee waxaa muuqata in kulankaasi uusan qabsoomin.
Xukuumadda KMG ah si faah faahsan ugama ay hadlin, in jawaab ku aadan qoraalkaasi ay ka heleen guddoomiyaha baarlamaanka iyo in kale. Hase yeeshee qoraalka ayaa lagu sheegay in xukuumaddu ay markastaa rajeyneyso inay wadahadal la gasho baarlamaanka, oo ku saabsan isla meel dhigidda waxa laga yeelayo xiliga kala guurka.
Sidoo kale golaha xukuumadda waxay ka digeen abaaraha adag ee ka jira dalka Soomaaliya, iyagoo soo dhoweeyay baaq uu jeediyay madaxweynihii hore ee dalka Ghana Jerry Rowling in gurmad deg deg ah loo fidiyo shacabka Soomaaliyeed ee abaarta daran ku habsatay.